CFA vs. FRM - Waa kuwee Certification waa Better? [It's a Close Call!]
Marka la barbardhigo Chart
CPA Imtixaanka Bank
CPA Shuruudaha Imtixaanka
CFA vs FRM: Waa kuwee Certification waa Better?
23 Aug CFA vs FRM: Waa kuwee Certification waa Better?
Ma CFA ama FRM Better for Your Career?
Waa maxay CFA a?
Waa maxay FRM a?
CFA vs FRM: Shuruudaha Certification
CFA vs FRM: Jidka Career
CFA vs FRM: Kharashka Certification
CFA vs FRM: mushaaraadka
Sidaas, Waa kuwee waa ka wanaagsan in aad loogu talagalay?
Tani waa mid ka mid ah su'aalaha inta badan la weydiiyay in ardayda waa in marka la go'aaminayo si loo horumariyo xirfadaha ay Maaliyadda. Doorashadaada waa muhiim sababtoo ah mid kasta oo caddeyn u qaadataa badan oo shaqo adag, lacag iyo waqti. Doorashada adkaan kartaa haddii aad tahay ma ka warqabaan kala duwan ay muhiim ah. Farqiga u dhaxeeya CFA iyo FRM ku caddeyn waa mawduucyo in lagu daboolay. CFA waxay dabooshaa ballaaran mowduucyo ee maaliyadda sida maaliyadda shirkadaha, maamulka faylalka, xisaabaadka, dakhliga go'an, iyo taagayo. Dhanka kale, FRM waa u gaar ah ee maaraynta khatarta. Sidoo kale, CFA aad isku diyaarinaya u wanaagsan xirfadaha ee bangiyada maalgashiga, maamulka faylalka, cilmi dhaqaale. FRM waxaa habboon loogu talagalay kuwa raba in la sameeyo xirfado shaqo ee maamulka halista ee bangiyada, khasnadda waaxda ama in qiimaynta halista.
CFA waxay u taagan tahay Chartered Financial Falanqyeeyaha iyo waa shahaado kasbaday iyada oo machadka CFA ah. CFAs yihiin dad ku takhasusay maamulka maalgashi. Qaar ka mid ah horyaal shaqo caan qabtay by CFAs waxaa ka mid ah tababaraha faylalka, oo ah falanqeeye cilmi, oo banker maalgashi. Waxa kale oo ay u muuqdaan in ay ka shaqeeyaan shirkadaha maaliyadda.
FRM u taagan tahay Maareeyaha Risk Financial oo waa shahaado ay bixiyaan ururka Global ee Xirfadlayaasha Risk. GARP iyo shahaado FRM waxaa caalamku aqoonsan yahay. FRMs qiimeeyo halista urur iyo horumarinta xeeladaha si loo yareeyo ama u kabayso. Waxay waxaa laga heli karaa shaqada ee bangiyada, shirkadaha, shirkadaha maaraynta hantida, iyo dawladda.
Si ay u noqdaan CFA a, waa in aad qorto barnaamijka shahaadada ay bixiyaan Institute CFA ah. Si aad ugu qorto barnaamijka, aad u baahan tahay shahaado afar sano ah ama isku mid ah waayo-aragnimo waxbarasho / shaqada iyo gudbaan imtixaanka saddex-qayb ka mid ah oo daboolaya mawduucyada soo socda:
Waxay qaadataa oo ku saabsan 300 saacadood oo wakhtiga waxbarashada noqotay heer kasta oo imtixaanka CFA ah. Sidoo kale, si ay u helaan dastuurka, waxaad u baahan tahay afarta addinba sano oo waayo-aragnimo shaqada la xiriirta hoos CFA a. Waa inaad sidoo kale xubin ka mid ah Institute CFA noqon.
Haddii aad rabto in aad noqon FRM a, waa inaad ku gudubto imtixaanka laba-qayb ka mid ah ay maamulaan Ururka Global ee Xirfadlayaasha Risk (GARP) daboolaya mawduucyada soo socda:
Qiimaha at Risk
Waxay caadi ahaan qaadataa musharax FRM ugu yaraan 150 saacadood inaad wax ka barato heerka imtixaanka kasta oo GARP dhiiri FRMs in ay qaataan 40 saacadood oo waxbarashada sii wadaan labadii sanaba. Iyadoo GARP aanu ku baaqaynaa in kasta oo gaar ah oo looga baahan yahay shahaado afar sano ah ama tirada yar ee saacadood credit, si ay shaqo u ah ee maaraynta khatarta qaban waxaa lagama maarmaan ah in ay leeyihiin bachelor ah ee. Si aad u kasbato shahaado midkood, loo diyaariyey inay maalgashi waqtiga badan ee waxbarashada iyo imtixaanka diyaarinta.
Waa caadi in CFAs leeyihiin fursado shaqo oo ka badan FRMs sababtoo ah waxbarashada iyo xirfadaha ballaadhan ay, gaar ahaan jagooyinka maamulka. CFAs takhasusay maareeyo iyo kor u qaadista maal-adag ee, taas oo u saari karaa shabag ballaaran mustaqbalkiisa falsan. CFAs caadi ahaan ka shaqeeyaan lacag ku heraaray, bangiyada maalgashiga, iyo maaliyadda shirkadaha samaynayaan bangi maalgashi, maamulka faylalka, iyo cilmi-sinaanta. Dhanka kale, FRMs yihiin diiradda kale oo badan oo gaar ah oo ku saabsan falanqeynta khatarta iyo gartaan siyaabo si ay u yareeyaan gudahood shirkad ama faylalka. FRMs caadi ahaan qaban jagooyinka heerka maamulka iyo fulinta kuwa xoogga saaraan halista iyo khatarta maalgashi.
The imtixaanka CFA ayaa lacag diiwaan gelinta barnaamijka hal mar ah $450. Wadarta lacagta ujrada imtixaanka heer kasta caadi ahaan kharashka $930. musharax CFA ka filan karaa in ay bixiyaan $1,100 si ay u $1,700 si ay u helaan ay charter. Si aad u qaadato imtixaanka FRM ah, aad u baahan tahay in ay bixiyaan a $400 lacagta diiwaangelinta marka lagu daro kharashka imtixaanka kasta. kharashka Qaybta I $875 iyo kharashka Qaybta II $475. Waxaad filan kartaa in ay bixiyaan $1,050 si ay u $1,500 si ay u noqdaan FRM a. heerka Pass labada imtixaan ku sugan 40 boqolkiiba kala duwan.
Mushaaraadka xirfad kasta oo ku xiran tahay horyaalka shaqada, sano oo waayo aragnimo ah, iyo meesha. CFAs kasban kartaa mushahar u dhexeeya $45,000 iyo $180,000 sannadkii ku xiran ay meel, waayo-aragnimo, iyo warshadaha. kala duwan mushaarka FRM waa mid aad la mid ah kala duwan ee mushaharka CFA. FRMs caadi kasban $50,000 si ay u $165,000.
Labada tilmaamood si siman loo ixtiraamo adduunka oo dhan iyo mid ka mid ma aha ka khayr badan oo kale oo ku. Waxay si fudud u kala duwan yihiin. Iyadoo naqshada CFA waa ballaadhan ee baaxadda iyo diiradda si xoogan on maalgelinta, FRM ku takhasusay qiimeynta iyo maareynta halista ah ee urur. Go'aanka aad ka dhexeeya labada waa gebi ahaanba ku xiran tahay meesha danahaaga jiifsan iyo waxa aad jecelahay in aan qabto more. Haddii aad rabto in aad wax dheeraad ah oo ku saabsan baran ugu wanaagsan ee koorsooyinka udiyaarin CFA you can go here. Ma jirto sabab aad u heli weydo labada. Waxaa oo dhan waxay ku xiran tahay waxa aad rabto in aad la xiriira mustaqbalkiisa. The seenyo ugu macquul ah isagoo labada CFA ah iyo FRM shahaado is if you are a CFA and would like to specialize in risk management. Xusuusnow, Doorshadan FRM waa hab ka badan oo gaar ah ka badan CFA ah. Sidaas, waxa laga yaabaa in faa'iido u leedahay in labada. Waxaan kula talin lahaa sugaya waxa aad rabto in aad la xiriira mustaqbalkiisa iyo soo qaado mid ka mid ah. Markaas ka dib marka aad bilowdo mustaqbalkiisa, waxaad go'aansan kartaa haddii ay noqon doonto faa'iido inay ku baaqaan in midba midka kale.
Isbarbardhigga Koorsooyinka Top FRM
Isbarbardhigga The Best CFA Coursess
Best Koorsooyinka Bar Prep
Best Review CPA Koorsooyinka ah 2018
Big 4 Accounting Shirkadaha MUSHAHARKA burburka
CPA Hab-Arjiga Imtixaanka
Best 2018 Review CPA dhimista & Xeerarka Promo